Sunaulo Nepal | हट चिल्ली क्याफे, काठमाण्डू मल । हट चिल्ली क्याफे, काठमाण्डू मल । – Sunaulo Nepal
हट चिल्ली क्याफे, काठमाण्डू मल ।
“तपाई के लिने खाजामा ?” भर्खरै वेटरले छोडेर गएको मेनु हेर्दै उसले मलाई सोधि । “खै खाजा त केही नखाउ होला आज खाना नै ढिलो खाइयो ।” उसको प्रश्नको उत्तर उसलाई हेर्दै दिए । मेरो उत्तरको पर्खाइमा उ मेरै अनुहारतिर सोझिएकी थिइ । “कफि लिने त ?” आँखा अलि चञ्चल पार्दै उसले सोधि । मैले टाउको हल्लाए । उ ब्यागबाट पर्स झिकेर भित्र काउण्टरतिर लागि ।
हट चिल्ली क्याफे काठ्माडौं मल को दोस्रो तल्लामा म एउटी युवतीको साथमा केही क्षण अगाडि आइपुगेको थिए । भर्याङ उक्लनासाथ बाहिरपट्टि २ वटा टेबलको साथमा ३,३ वटा कुर्सी थिए । भित्रपट्टि निकै टेबल सजिएका थिए । हामी बाहिरै बस्यौ यो । यो उसको मनपर्ने क्याफे हो, उ प्राय यस क्याफेमा आउने गर्छे रे । म भने पहिलो पटक आउदैथिए । अगाडिपट्टि एन्.ए.सी. मा गाडीका लाबालस्कर देखिन्थ्यो मान्छेको चहलपहल पनि त्यस्तै ।
दिउसोको १ बजिसकेको थियो,उ काउण्टरबाट कफी अर्डर गरेर आई । हामी कुनापट्टिको टेबलमा थियौ । छेवैको टेबल तीनजना केटाले भरिएको थियो उ भित्र जाँदा । उँ र म एकदमै आमनेसामने बसेका थियौ ।
अप्रिशा,उसको नामै अनौठो । नया धारको शब्दले बनेको तर पुरानै शब्दको मिठास । उ साच्चै राम्री लाग्छ । साधारण पहिरनमा उ राम्री देखिन्छे । विछट्टै राम्री त भन्दिन तर उसका हरेक अँग प्रिय लाग्छन् । उसका केही मिलाएका आँखीभौ निकै काला छन् । गोरी वर्णकी उ ठुला अनि गोला आँखामा केही लगाउदिन । मैले आजै उसलाई नियाले उसको परेला पनि कति लामा अनि माथि फर्किएका, सानो छदा बहिनीले च्यापी हिड्ने गुडियाको जस्तो । पिपलपाते ओठमा उसले ओठ रँगको लिपिस्टिक लाकीछे । यो शहरको भिडमा कैयौं केटीसँग मेरो कुम ठोकिन्छ जो भन्दा उ धेरै फरक छे । ओठभरी रातो, आँखानै पुरिनेगरी गाजल, कपालमा राता कैला रँग छि.. कत्ति नि राम्रा लाग्दैनन मलाई ति केटीहरु ।
सदाझै उसले पाइन्ट टिसर्ट नै लगाकीछे । आधुनिक पहिरनमा पनि उसमा सादगी छ । कस्सिएको कालो पाइन्छ जुन कम्मर भन्दा माथिसम्म पुगेको जहाँ सेतो रँगको टिसर्टलाई भित्रपट्टि च्यापेकीछे । सर्लक्क मिलेको छ उसको जिउडाल ।
“अनि नयाँ खबर सुनाउनुस” उसले मन्द मुस्कानका साथ पिपलपाते ओठ थोरै तन्काउदै सोधि । “खासै केही छैन, काम नै छैन भनौ, कसैले बोलाइहाले दौडिहालिन्छ ,यस्तै छ ।”म हाँसे उसले पनि हाँस्दै टाउको तलमाथि गरि । अलि लाज पनि लाग्यो, कस्तो बेकामे पो सोचि कि भन्ने । उ जति साधारण छे कुरा पनि खुलस्त गर्छे । उ राम्रो कामको प्रशंसा अनि नराम्रो कामको विरोध गर्छे ।
उसँग म रातविरात पनि कुरा हुन्छ कहिलेकाही तर उ आफ्नो दायरालाई कहिल्यै नाघ्दिन । केटो मान्छे न हुँ कुनै न कुनै बेला कुरा बटार्न मन लाग्छ तर उसले मलाई सोझ्याएर उसकै बाटोमा ल्याएर छाड्ने । मलाई उसको यो बानी मनपर्छ ।
उ जस्तो परिवेशमा पनि आफुलाई ढालेर अगाडि बढ्न सक्ने आजकी नारी हो । सोच्छु यो भिडभाडमा गिद्धे नजरबाट हरेक दिन कसरी बचेर हिडेकी होली । “ओहो मुटुनै चिसो हुने कुरा ” म मेरो अगाडी बसेकी अप्रिशालाई झस्किदै हेर्छु । एक किसिमको ऐठनले थिच्छ मलाई ।“ गिद्धे नजर ” कति डरलाग्दो शब्द लाग्यो आज मलाई । तर उ हाँसिरहेकी छे मेरो अगाडि मानौ यो सबबाट बेपर्वाह बाँचिरहेकी छे यो दुनियाँमा । “के सोच्नुभाको ?” कफी म तिर सार्दै उसले सोधि । “कफी लिनुस” भन्दै आफुले पनि लिई । हत्तेरी कस्तो गहिरो सोचमा डुबेछु , वेटरले कुनबेला कफी ल्याएछ पत्तो नै पाइन् । “खोई बेलाबेला यस्तै हुन्छ मलाई” कप उठाउदै उतिर हेरे । उसको अनुहारमा कुनै भाव भेटिन । उसको नजर कपतिरै थियो । मेरो कुरा सुनेर निधार खुम्च्याउदै मलाई हेरी । लाज लाग्यो उसँग नजर जुध्दा अनि डर पनि । खिसिक्क हाँसे, उसले पनि बाँया गालामा घाल्डो पारी ।
हामी बसेको टेबलबाट भृकुटीमण्डपको फनपार्क पनि केही हदसम्म देखिन्थ्यो । विशेष त्यहाँबाट देखिने भनेकै रोटेपिङ थियो । “तपाइले त्यो पिङ खेल्नुभाछ ?” बडा उत्सुकताकासाथ उसले सोधि मानौ पिङै खेल्न लागेजस्तो । मैले पनि खेलेको छु भनिदिए । “उसो भए डर लाग्दैन तपाईलाई ?” बढिनै उत्सुकतामा थिइ उ । मैले टाउको हल्लाए । “छिटो कफि सकौं अनि खेल्न जाम ।” म एकछिन अलमलिए । “जाने नै होर ?” एकचोटी सोधि हेरे बा नजाने भन्छे कि भनेर ।“ अब काम के छ त जाम न, कफी पनि सकियो ।” यति भनेपछि मेरो पनि के सिप लागोस र ? “लौ जाम न त”
दिउँसोको २ बजेर १० मिनेट भइसकेको थियो फनपार्क पुग्दा । प्रवेश टिकट लिन म अगाडि तम्सिए उसलाइ छोडेर । दुइवटा टिकट मागे, पछाडिबाट कोट्याएर उसको विधार्थी कार्ड दिइ । दुबैको कार्डको छुट पनि भयो । भित्र छिर्नासाथ उ कतै नहेरी सिधै रोटेपिङतिर लागि । आफुलाई भने पसिनै छुटेको थियो । खेलेको छु भनिहाले तर उचाईदेखि चाहि अलि डर लाग्छ भनेर पनि भनिसकेको त थिए अलि बाठो भएर । टिकट उसैले किनी खै कति तिरी थाहा नी भएन् । अरु केही खेलिएछ भने मै काटुला टिकट भनेर सोच्दै उसलाई कुरे । चर्को घाममा पसिना चिटचिट देखे उसको निधारमा पनि । भिडलाइ पन्छाउदै उ छेउमा आइ अनि निच्च हाँसी ।
आधा घण्टापछि हाम्रो पालो आयो । एक अर्कातिर मुख सोझ्याएर हामी बस्यौ । विस्तारै मान्छे भरिए । पिङको चाल पनि विस्तारै बढ्यो । पिङ दौडियो । त्यो ट्याङकाभित्रका हामी हल्लिन थाल्यौ । “चिच्याउनुपर्छ है धेरै” भनेकी थिइ उसले । मलाई पनि डर भगाउने बहाना फेला परेको थियो । पिङले धेरै जोडले गोल चक्कर लायो । हावाले फिरिरि उडायो । अब त पछार्ला जस्तै भो गाला ताता भाका थिए । चिच्याउन पनि सकिरहेको थिइन । तर मेरो ठिक सामु हावालाई खुलेर महसुस गर्दै थिइ उ । खुला हात आकाशमा फिजाउदै रमाइरहेकी थिइ । उसको अनुहारमा डर होइन खुशीले पिङ खेल्दैथियो ।
उसको यस्तो निडरपनाले मलाई अचम्मित पार्यो । ६ ,७ फन्का पछि पिङ रोकियो, मुटुको चाल पनि विस्तारै कम हुन थाल्यो । उसको अनुहारमा असंतुष्टिको भाव मैले पढ्न सके । “अब के खेल्ने ?” उसले कोलम्बसतिर हात तन्काई । म टिकट लिन गए ।
१५ मिनेटको भिडपछि कोलम्बसमा बस्यौ सबैभन्दा माथि । “यहा बस्दा अलि रमाइलो हुन्छ ।” उ ब्याग मिलाउदै यस्तै भन्दै थिइ । कोलम्बसको गति विस्तारै बढ्यो । जतातिर कोलम्बस उक्लिन्थ्यो त्यो साइडका सबै बस्थे अनि अगाडि पट्टि बस्नेहरु हुटिङ गर्दै उठ्थे । त्यसो गर्दा ज्यादा डर लाग्छ रे उसैले भनेकी यो कुरा पनि । उ त उठेको उठै चिच्याउदै थिइ । कस्तो डर पनि नलागेको । उठ्दा त सर्लक्कै खसिएला जस्तो हुँदोरैछ । यसो के उठेको थिए सातो नै गयो । बसिरहे लाजै पचाएर । कोलम्बसको गतिले पनि विट मार्यो । उसलाई रमाइलो लागेको थियो तर मलाई चिन्ता, फेरि खेलौं भन्ने होकि भनेर । कोलम्बस खेलेर सकिनासाथ मैले भने “अब घरतिर लाग्नुपर्ला ”। उसको अनुहार थोरै अध्यारो भयो तर उसले हाँसोले लुकाइ । गेटबाट निस्किनेबेला फ्याट्ट एउटा हरिलन्ठु मतिर हुत्तिदैथियो । त्यसलाई पनि आजै यता मर्न परेको । यसो हात उठाएर इसारा गरे उसले अप्रिशालाई देख्यो अनि रोकियो । “अब यसले बबाल गर्ने भो कलेजमा ।” दिमागमा सल्बलायो यो कुरा ।
बाहिर निस्केपछि खाजा खाने सुरमा एउटा खाजा पसल छिरेर मम अर्डर गरे । उसले भेज खाने भनि मैले बफ । बाहुनको छोरो भएर केटीको अगाडि राँगाको मासु पनि चपाए । एकदिन त नखाको भए पनि हुने जस्तो लाग्याथ्यो । मम आइ त सक्यो टेबलमा , खाए ग्वामग्वाम ।
१५ मिनेट पैदल हिडेर हामी एन्.ए.सी. आइपुग्यौ । उ मलाई गाडी चढ्ने ठाउसम्म छोड्न आइ ।“ हस्त जान्छु ।”भन्दै दुई हात जोडी मैले पनि दुबै हात जोडे । उ सरासर न्युरोड गेटतिर लागि हरेक पाइलाले मलाइ पछाडि पार्दै । मैले उसलाई हेरिरहे तर उ न एकचोटि फर्कि न त उसको गतिलाई रोकि । एकनासको गतिमा मोडिएको बाटो पछ्याउदै उ मेरा आँखाबाट हराई ।
२६ कार्तिक २०७३, शुक्रबार ०६:४५ मा प्रकाशित
१०० दिन पुरा गरेका काठमाडौँका मेयरलाई आयो यस्तो कडा पत्र
लिङ्ग परिवर्तन गरेर पुरुषबाट महिला बनेपछि ..
रोचक यौन कथा – समलिंगी प्रेम ..
बैंसमा पारिजातको रूप, शरीर र बोली तीनै थोकले युवाहरू मोहित
प्रेमिका संग एउटै ओच्छ्यानमा बिताएको त्यो पहिलो रात …